Galla chinensis sitere na China. isi akụrụngwa nke gallnut bụ gallnut tannin. tannin na-hydrolyzed ka gallic acid. gallic acid bụ malite ihe onwunwe nke ọtụtụ ọgwụ intermediates ma ọ bụ ọgwụ.
The ụdịdị dị iche iche antimicrobial ọrụ nke gallnut ike. na decoction nke gallnut nwere dị iche iche inhibitory mmetụta na ọtụtụ pụta. ya antimicrobial mmetụta bụ ime ka protein ịkpali na coagulate mfe site tanning. anụ bụ isi nkesa akụkụ nke antimicrobial mmiri.
antioxidant Arụ Ọrụ
The Ụlọ-phenolic hydroxyl otu nwere mmetụta dị mma na scavenging superoxide free radicals, na a Ọdịdị nwekwara dị ukwuu n'ime gallnut, n'ihi ya, nwere a ịrịba mgbochi merela agadi mmetụta. gallic acid na propyl gallate na-n'ọtụtụ ebe dị ka antioxidants na nri na ndị ọzọ na na ngwaahịa.
Wide atụmanya eji
Gallnut na-eji ya emepụta a na-eji oge a na nri, na nkà mmụta ọgwụ, ihe ntecha na ahụ ike ọrụ.
Anyị ga-nọgidere izute na-eto eto
kwesịrị nke ndị ahịa anyị na elu àgwà
ngwaahịa na ezi ozi!
Shanghai Kanwinn Pharmchem Ltd. tọrọ ntọala na 2002, tumadi aku na mmepe, mmepụta na ahia nke na-emepụta ọgwụ intermediates dị ka gallic acid na-eji ya emepụta. anyị a na-eduga soplaya ọkachamara na-enye intermediates maka mba chemical, ọgwụ, ezi chemical, akwa na dyeing ọrụ. Shanghai kanwinn Pharmchem Ltd. eji na-isi soplaya 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ka Roche Group. ngwaahịa na-ere ọma na Japan, na United States na Europe, na-enwe kwa afọ ahịa nke ọtụtụ nde dollar. anyị ga-nọgidere izute na-eto eto mkpa nke ndị ahịa anyị na elu àgwà ngwaahịa na ezi ozi!